I-Mountain Villa-i-Platers Cottage - I-Airbnb
I-Mountain Villa-i-Platers Cottage
Indlu eyenziwe ngomhlaba sinombuki zindwendwe onguSunitha
Indalo kwaye akukho Enye into - Ifakwe kwiihektare ezintlanu zehlathi elinyulu labucala kwincopho yentaba ekude, imida yepropathi Kurushumala Ashram estate kwelinye icala kwaye ijonge iintlambo eziluhlaza kunye nembono yentaka entle ye-5 yezithili zaseKerala. Ukuzola apha kuya kukunceda uphumle ingqondo yakho, umzimba kunye nomphefumlo. Sidale le ndawo yoxolo nenzolo ukuze sinxibelelane nemvisiswano yomhlaba, imithi, iintaka, iinkwenkwezi kunye nesibhakabhaka esiluhlaza.
Buyela kwindalo, ubuyele kwiziseko. Uhleli phezulu ezintabeni uneembono ezimangalisayo kuzo zonke iintlambo, uya kuyonwabela indalo ngokugqibeleleyo. Okwangoku sinezindlu zangasese ezintathu. Ezi zindlu zakhiwe ngokwemveli ngamagcisa omthonyama. Ngelixa iqhubeleka nokugcina ilifa layo, le shedi ineminyaka engamashumi amathandathu ubudala iye yalungiswa yaze yabuyiselwa kumxholo kunye nomhombiso wePlanters Cottage engaqhelekanga. Le ndlu yangasese inika ubumfihlo obukhulu kwaye ijikeleze i-300 yeemitha kude neendawo eziqhelekileyo
Siyazingca njengendawo eqaphela indalo, indawo yeholide yeCarbon Neutral, kude nesiphithiphithi somntu. Sikholelwa kukhenketho olunenkathalo olumandla enguqu anamandla okuvuselela uluntu lwasekuhlaleni, ukudala imisebenzi kunye nokukhusela iindawo ekusingwa kuzo kwizizukulwana ezizayo. Ambalwa amalinge ethu abandakanya ukuqeshwa kwabantu basekhaya, i-100% yokuvelisa amandla avuselelweyo ngeSola kunye noMoya, ukulima okuphilayo, ukukhangela indawo, ukuphepha ukusetyenziswa kweplastiki enye kunye nokuhlonela izityalo nezilwanyana ezingqongileyo.
IVagamon yaziwa ngokuba 'yiScotland yaseIndiya' emi kumda wesithili saseKottayam-Idukki kwaye ikwimitha eyi-1100 ukusuka kwinqanaba lolwandle. Isikhululo seenduli zeVagamon siquka uthotho oluhle lweenduli, iintlambo kunye neengxangxasi eziqengqelekayo ezenza ukuba ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka kubakhenkethi.
Isikhululo senduli eVagamon siquka i-3 entle yenduli yeqela elibizwa ngokuba yiThangal hill, induli yeMurugan kunye neKurismala. Umoya weVagamon ugqunywe yimozulu enenkungu kunye nobushushu obuphakathi kwe-10 ukuya kwi-23 C ngexesha lasehlotyeni. IVagamon inomahluko wayo wokuhamba, ukuhamba ngeparagliding, ukunyuka intaba kunye nokunyuka amatye.
Ukuhamba kuhola wenduli ogqunywe kwintlambo enzulu kukunika amava achulumancisayo ngombono ozukileyo wendalo. Eyona nto inomtsalane kulo mmandla yiKurishumala 'iNtaba yomnqamlezo ongcwele', imonki yaseKurishumala, iVagamon Meadows (Amadlelo aluhlaza eVagamon), iiFama zeProjekthi ye-Indo-Swiss, iiFama zePine, iMooppanpara (i-v-shaped canyon) kunye neParagliding kunye Umnyhadala weParagliding oqhutywa kube kanye ngonyaka kwiihambo.
I-National Geographic Traveller idwelise iVagamon kuluhlu lwabo lwezona ndawo zinomtsalane ezingama-50 zokundwendwela eIndiya.
Ukhenketho lokubona indawo lwendawo lungalungiselelwa ngokwesicelo.
Umbuki zindwendwe ngu- Sunitha
Thina (uSunitha kunye no-Alex) ngoku sihlala eMumbai, kodwa sityelela rhoqo kwindawo yethu yokuhlala esiyakhayo ngokuthanda okukhulu. Sisoloko sifumaneka kwifowuni. Umphathi wethu onobuhlobo kunye namava, uAbel uyafumaneka kwindawo yokunxibelelana kwaye unolwazi oluphezulu malunga nendawo kwaye unokukunceda ngayo naziphi na iimfuno zakho.
Thina (uSunitha kunye no-Alex) ngoku sihlala eMumbai, kodwa sityelela rhoqo kwindawo yethu yokuhlala esiyakhayo ngokuthanda okukhulu. Sisoloko sifumaneka kwifowuni. Umphathi wethu…